Simeiz kuyona itholakala engxenyeni ephakathi ye ogwini YaseCrimea, babalelwa ku-5 km kusuka Alupka, e ubuhle ekhexisayo emaphandleni. Lwekuphatfwa ngalokuyimphumelelo emzaneni kungokwalabo Yalta City Council. Aphumule Simeiz amaholide elinde imvelo omangalisayo, ulwandle ecacile futhi, yebo, amabhishi olunothile ukhululekile.
Incazelo kwalesi sigodi
Makalale Simeiz bangaba nakho ongenakulibaleka ngempela. Isimo sezulu kule ndawo kule nhlonhlo kuyinto nakwezifudumele, uhlobo iMedithera. Uma beqhathaniswa Sochi emoyeni kancane yomusa, ethambile futhi uya woma. Amazinga isilinganiso ehlobo + 26-28 C. Isizini isiqongo iqala Simeiz azungeze maphakathi no-September futhi kuthathe amasonto amathathu.
Nature okwamanje, inhlonhlo ye-eCrimea ngempela ukuba kuhle ngokumangalisayo. Leli dolobhana ezungezwe nxazonke embozwe izihlahla ezihlale ziluhlaza kanye zokhuni ezintabeni. Esikhathini Simeize yonke indawo sikhule imivini lezihlahla zamalala, rose ukuqhakaza kanye peony abadumile YaseCrimea.
Yikuphi kungenziwa wavakashela amabhishi emzaneni Simeiz: Izibuyekezo
Hlala kule ndawo ziyaneliswa cishe wonke umuntu eza lapha wake amaholide. Ukubuyekeza, kuhlanganise emabhishi ayo, ngendlela kakhulu omuhle. Abaningi baye baphawula yokuthi ugu eCrimea, futhi ikakhulu Simeiz, iholide Kuyinto elula kakhulu. Uma beqhathaniswa Sochi amabhishi kule ndawo ngempela emincane futhi iDemo. Kodwa ngesikhathi esifanayo futhi ebabazekayo okuningi.
Paid amabhishi e Simeiz cha. Nokho, abanye kuso, uvunyelwe kuphela khona izincwadi zezempilo. kokuba kuphela izandla idokhumenti, isibonelo, ungavakashela ebhishi "Simeiz" yempesheni igama elifanayo. Kodwa-ke, ngaphambi uhambo eCrimea ukusebenzisa ku odokotela kungaqali ngempela. Ngo Simeiz zikhona yini ezinye izindawo lapho unga sizikhandle futhi nhlobo, futhi ukhululekile ukuthamela ilanga futhi ukubhukuda.
amabhishi Public edolobhaneni ezine kuphela - edolobheni kabanzi nangamaphesenti, "frigate", "Coral" futhi itholakala eceleni kwehhotela lethu "Assol". Bonke, ngaphandle kokukhetha, athandwa kakhulu nge holidaymakers. Ngaphandle evamile, kukhona e Simeiz futhi khulula zomphakathi zabantu abanqunu lolwandle. Kodwa-ke, ngenxa imininingwane ethile uvakashele akusiyo izivakashi eziningi kakhulu.
edolobheni kabanzi nangamaphesenti ebhishi
esogwini e Simeiz hhayi kuphela olunothile, kodwa ukhululekile kakhulu eziphumulele. Futhi cishe yonke indawo. Nokho, iningi holidaymakers Yiqiniso, uncamela uvakashele obscheposelkovy lolwandle. Simeiz - Indawo akuyona likhulu kakhulu. Ngakho-ke, ukuze uthole ngokushesha ukuze ebhishi kungaba jikelele kusukela cishe noma kuphi. Kuyinto wokugcina cishe okuphambene engxenyeni ephakathi ye emzaneni, budebuduze ezintabeni, "Diva."
Ukuma jikelele kuyinto lolwandle ucwezana e Simeiz, njengoba itholakala endaweni Cove ezincane zemvelo. Le ndawo ibe omunye pretty big. Iholidi baye lapha Kuyinto elula kakhulu. Nokho, ebhishi engamboziwe isihlabathi esithambile futhi amatshe amancane. Nokho, cishe akukho ezinkulu phezu ogwini. Iya ulwandle ubuye ngempela elula.
Ziphethe obscheposelkovy lolwandle limnandi kakhulu. Uma wayefisa, ungakwazi ukuqasha parasol futhi ezivulekayo. Ngasogwini ngokuvamile uya eziningi nabathengisi ukunikela iziphuzo, ummbila, izithelo kanye belyashi ngakho. D. Uma wayefisa, ngalesi lolwandle ungavakashela futhi ezikhangayo. Setha kubo ngempela ejwayelekile, "ithebhulethi" "banana", njll ...
Kuyinto leli bhishi yayingase ibizwe ngokuthi u best Simeiz. Ukube kwakungengenxa oyedwa "kodwa." Ngeshwa, evakashela kuye omningi abantu. Futhi ikakhulukazi ngenkathi isiqongo. Sekuyisikhathi eside eza Simeiz holidaymakers belulekwa Wabasaqalayo ukuya lapha kuze September, lapho ukuthutheleka eyinhloko izivakashi uwela.
Izivakashi abakhetha ukudlala, kuwufanele ngokuvakashela i-ubhukuda Simeiz kwenye indawo. Ngo echwebeni jikelele, kodwa ngaleso komunye umkhawulo "isikela", ngakwesokudla unyawo Diva kungenye elula kakhulu elokishini lolwandle. Simeiz (eCrimea) - idolobha kakhulu. Kodwa uma ufuna ukuthola lokhu ugu oluncane, ngokuthi "frigate", kuyoba lula. Ungakwazi ukufinyelela by Cypress Alley ke. Kusukela phakathi ezitaladini olunothile ebhishi phansi indlela. Ngesinye amagatsha iphuzu ke. Hamba uye olwandle kuze Rotunda eduze izitebhisi ngokusebenzisa uphayini zokhuni epaki. Eduze pier jikela ngakwesokudla.
Ngokungafani jikelele, lolwandle "frigate" has a endaweni encane kakhulu. Phakathi kunesiphepho, odla izindwani ngisho ngokuphelele. Nokho, abahambi kukhona ingasaphathwa, futhi itheku amanzi kancane elula kakhudlwana. Kukho konke lokhu, kodwa ulwandle ogwini "Fregat" Yisimanga Emerald umbala. Ngisho ngesikhathi kunesiphepho okwamanje emzaneni esogwini emanzini kungekho turbidity.
Kanye idolobha-wide, ogwini "frigate" ungakwazi ukuqasha esihlalweni lolwandle futhi isambulela. Thenga corn noma Tat nabo ayisebenzi. Ngokuvamile, ngenxa kuqhathaniswa uncrowded futhi ukutholakala Izinsiza ezithile amaholide kakhulu the best Simeiz ubona "Fregat". izivakashi ngokuvamile (ngendawo) leli bhishi ngokuthi "Diva". Simeiz abaningi vakashela yona Indlela ewubuqili kunazo kude izinsuku ogwini kule ndawo enhle.
Ngakolunye (entshonalanga) ohlangothini Diva entabeni, futhi Cove ezincane endaweni, kukhona enye lolwandle enhle. Simeiz - idolobha ngoba holidaymakers ayibizi kakhulu. Futhi iningi amabhishi, njengoba sekushiwo, iyatholakala ukuvakashela, futhi kuba ngokuphelele free. Nokho, kwakungelula ngaso sonke isikhathi. Beach "Coral" Sekuyisikhathi eside ngokungemthetho ngesikhathi ezizimele. Futhi ngenxa yalokho, okokufaka "ofayo elula" lapha yavalwa. Iyatholakala ukuvakashela le ndawo kwakungu-2014.
Ukuze uthole ebhishi "Coral" kungaba eside kakhulu, nenkani ekugcineni entabeni ikati Cypress Alley. Okokuqala udinga ukuba ahambe kwakhiwe sibhedlela esangweni, bese itshe enyinyekile phansi olwandle.
Ubude kanye ububanzi ebhishi "Coral" lincane kakhulu. Ngo phakathi kwalo embozwe amatshe amancane, futhi emaphethelweni - amadwala amakhulu (phakathi lapho, ngenhlanhla, kukhona izikhala ezinkulu ndima). Amanzi lapha njengoba Emerald ecacile futhi esobala, kanye ogwini "Fregat". Nokho, nabathengisi zommbila lapha ungahambi. Ngeke kusebenze lapha ukuqasha esihlalweni lolwandle. Fresh amanzi eseduze futhi kukhona. Ngakho, going to the beach "Coral", ibhodlela plastic lamanzi esiphethu ukuthatha nawe kufanele nakanjani.
Le ndawo edolobhaneni nazo litholakale emphakathini. Kodwa-ke, iya ebhishi nude e Simeiz elibiza abantu kuphela elingenalo yimuphi izakhiwo. Itholakala ngokuqondile ngaphansi ikati entabeni. Ukuze afike khona, udinga ukuhambisa emgwaqweni osuka Simeiz eceleni Katsiveli. Kufinyelela Lebedinki (cishe phakathi cat entabeni), ukuba behlele indlela eya olwandle.
Kuyinto lolwandle nudist ngokuyinhloko jumble olunothile ezinguzungeni ezinkulu. surface enjalo bushelelezi, efana kuleyandawo, esogwini okwamanje alihlukile.
Beka eduze ehhotela "Assol"
Kukhona endaweni enye ezithakazelisayo ngempela, kodwa lengxenye zasendle lolwandle. Simeiz welula ogwini ibanga elingamakhilomitha amaningi. Zonke amabhishi ezibhekwa ngenhla ngokwengxenye yayo entshonalanga. Ugu olusempumalanga kuphela ezifanelekela iholide ucishe ukhululekile, elise okuphambene ehhotela "Assol". Ngo amaholide iholidi baye Simeiz, leli bhishi iyathandwa kakhulu ngoba thinly kuphela edumile. Hlala lapha kalula isihlobo (phezu amatshe phakathi amatshe amakhulu) nganoma isiphi isikhathi. Deckchairs kule lolwandle hhayi ukuze iqashwe, kodwa abathengisi imikhiqizo phezu uhambo ogwini.
Aphumule Simeiz: izikhangibavakashi
Yiqiniso, e Simeiz, njenganoma iyiphi enye Black Sea resort, awukwazi kuphela sunbathe zibhukude kolwandle, kodwa futhi ukuvakashela zonke izinhlobo hambo. Of izindawo zomlando edolobhaneni ngokuba holidaymakers ngokuqinisekile kuyoba ezithakazelisayo yokungcwaba Tauri isikhathi amanxiwa noLyman-Isar, kanye nezindawo zokukhulekela kwesikhathi Hellenic eNtabeni Diva.
Budebuduze umuzana Blue Bay amanzi ipaki. ESoviet Simeize ubudala ine Observatory, okuyinto yake kwenziwe kokuma of the Moon. Kusihlwa edolobhaneni, ungaya yokudlela noma vakashela i-dance floor.
Kandahar - idolobha eningizimu Afghanistan. Iphuzu nesineke emzimbeni planethi
Amaphuzu asebenzayo phezu kwezinyawo. Unyawo massage kuyadingeka kubo bonke!
Roll kusukela lavash ne-salmon ngibhema
Mikhail Mamaev: career kanye nempilo yakho ye wamabhayisikobho owaziwayo